အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဖရုံသီးက ပြောတဲ့စကားများ
31 Responses to “ဖရုံသီးက ပြောတဲ့စကားများ”
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဘယ်ကရပါလိမ့်...။ ပုံတွေက အနုစိတ်ပြီး လက်ရာမြောက်လိုက်တာ...
ချောချောလှလှ ပုံလေးတွေ လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ပုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ စာလေးတွေဖတ်ရင်းြဲပုံးမိတယ်ချောရေ...။
မချော ရေ ...Bravo!!!!
ပုံနဲ့ စာနဲ့ တွဲဖတ်ရတာ သဘောကျလိုက်တာ။
မိုက်တယ် ဟောလိုဝင်းတုန်းက တင်လိုက်ရမှာ...း)
ရှာရှာဖွေဖွေတင်တဲ့ ချစ်မကြီးလဲတော်တယ် ..
ဒါပေမယ့် ပုံတွေကြည့်ပြီးကြောက်တယ် .အီးဟီးးဟီးး
ကြောင်းစရာကြီး... ကြောင်းစရာကြီးတွေ အများကြီးပဲ... အား ကြောင်းစရာကြီး...
ဟင်းမချက်စားရတာ .. နာတယ် :P
Nice idea... The first pumpkin face is "Chucky," the legend horror movie in all time. I still remember when I watched it I wasachild.
ဒီလောက် ကြောက်စရာကောင်းရင် ဘယ်သူလာမလဲနော်း) တံခါမှူးပြောင်းလိုက်နော်း)
မချောက တကယ်ပဲ ရှာရှာဖွေဖွေ စုဆောင်းနိုင်တယ်ဗျာ၊ ဖရုံသီး ပန်းပုတွေက လက်ရာမြောက်လိုက်တာ..၊ မချောရဲ့ ပုံစာတွေနဲ့ ပိုပြီး အသက်ဝင်သွားတယ်..၊ ပထမ ရိုးရိုးပဲ ရေးထားတယ် မှတ်နေတာ..၊ တချို့စာတွေကို ဆက်စပ်ဖတ်ကြည့်မှ မျက်မှောက်ကို ထင်ဟပ်နေတဲ့ ဖရုံသီး မှန်လေးတွေပါလားလို့ သဘောပေါက် သွားတယ်၊း)
တွဲပေးထားတဲ့ စာလေးတွေက ချစ်စရာ ၊ ပြုံးချင်စရာ ၊ ပျော်စရား))
စပါးသိမ်းချိန်ရောက်ရင် ပေါင်းစားဖို့ လာခူးဦးမယ်။
ပုံတွေကြည့်ရင်း တစ်ခုပဲစဉ်းစားမိတယ်...ဒီလောက် ရှာရှာဖွေဖွေလုပ်နိုင်တဲ့ တို့ဒေါ်ချောတစ်ယောက် တိုးတိုးဖော်၊ တိုးတိုးဖက်ကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ အခုထိရှာမတွေ့နိုင်သေးပါလိမ့်လို့...းးး)))
အိုဘားမားနဲ့ အလွန်တူ၏။း)
တကယ့်ကို အနုစိတ်ခြယ်မှုန်း ထွင်းထုထားတဲ့ ရွှေဖရုံသီးပန်းပုတွေပဲ။ သဘောကျလိုက်တာ။ အဲဒီလောက်လက်ရာမြောက်အောင် ထွင်းနိုင်တဲ့ပညာရှင်များကို တကယ်လေးစားပါတယ်။ ချောကလဲ ရှာရှာဖွေဖွေ အတော်စုဆောင်းတင်ပြတတ်တာပဲ။ ပုံနဲ့စာလေးတွေကလဲ ဟပ်လို့... စိတ်ဝင်စားစရာတွေကို အသေအချာ ဝေမျှပေးတဲ့ချောကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ရှင်...း))
ပုံတွေလုပ်ထားတာ အရမ်းမိုက်တယ် ..
ပုံနဲ့ စာသားလေးတွေ တွဲဖတ်ရတာ ပိုပြီး သဘာဝကျ
အားပေးသွားပါတယ် မချောရေ.... ဖရုံသီး ပုံဖော်တဲ့လူတော့ ဘယ်လိုနေလဲ မသိဘူး၊ ကြည့်တဲ့လူတော့ ကျောထဲက ခပ်စိမ့်စိမ့်ရယ် :)
ဟုတ်ပါ့ ချောရေ ထူးထူးဆန်းဆန်းကို ရှာဖွေပေးထားတာ ရှဲရှဲပါ။ လက်ျာတကယ်မြောက်တယ်နော်။ ဘုန်းဘုန်းတောင် အဲဒီလိုပုံလေးတွေ ဆွဲချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် ချောရေ။
ဖရုံသီးပန်းပုတွေက ထူးဆန်းပြီး အသက်ဝင်တယ်။ မိုက်တယ်ဗျာ။ရှာလဲ ရှာတတ်ပါပေ့။ အများကြီးပဲနော်။ ရေးထားတာလေးတွေကလည်း လိုက်ဖက်တယ်။း)
Halloween နေ့ကတင်ရမှာ ချောရဲ့ :P
တတ်လည်းတတ်နိုင်လှပါတယ်း) (ယောက္ခမ ခရီး ၅ရက်ထွက်မယ် ချွေးမကိုကြိုပြောခဲ့တာ စိတ်ချမယ်း))
:).. လက်ရာတွေ သေသပ်လှတယ်ဗျာ.. အနုပညာဆိုတာ ဒါပဲ..း))
ကြောက်ချာဂျီး တို့..မ..ရာ..စာသားလေးတွေထည့်ထားလို့ တော်တော့တယ်..ဟာသပဲး)) လက်ရာတွေကတော့မြောက်လွန်းတယ်။
မချော ပုံကြီးကလဲ ရယ်စရာကြီး... ဟီး...ဟီး..
ရှာရှာဖွေဖွေ မချောကတော့ ရှာနိုင်တယ်...
ဖရုံသီး ဟင်း စားချင်သွားတယ် ... ကောင်းလိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေ တော်မှတော် ဘဲ ချော ရေ
ငိုပါနဲ့ တိတ် တိတ်၊
အောင်မလေး...မမရယ်၊ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတင်ထားနိုင်တယ်၊ အရမ်းသဘောကျလို့ ရှယ်သွားပြီနော်..ဟဲဟဲ